Hoy – Page 3 – Wargeyska Waxgarad
JAWAAB: Caqabadaha hor taagan dawladowga Soomaaliya
July 31, 2018	Aragti 0
Dhibaatooyinka hortaagan dawladnimada Soomaaliya waxa ugu weyn: (1) Xamar oo aanay dawladdu ka shaqeyn karin (2) Al-Shabaab oo Kharbudaad u yeelan (3) Soomaalilaan oo goosasho rabto oo dalkii qayb dhan aanay dawladda dhexe ka shaqayn. Maamul goboleedyada iyo madaxweyneyaasha badani mushkilad dhab ah ma aha. Sidaa waxa yidhi abwaan Maxamed Aadan Ciiraale isaga …
Caqabadaha hor taagan dawladowga Soomaaliya
Dadka badankoodu waxa ay baylah u yihiin dacaayado meelo gaar ah laga soo afuufay in lagu majare habaabiyo. Waxaaba dhici karta qofku in uu duudka ku sito dacaayad isaga iyo degaankiisa ku lid ah, ha ahaatee loogu sawiray inay tahay waddaniyad iyo habkii loo dawladoobi lahaa. Waxaa kale oo dhici …
Baraha bulshada: Dhib iyo Dheef
July 29, 2018	Falanqayn 0
Kacdoonka tignoolajiyadeed ee dunida ka tisqaaday, wuxu suurageliyey in adduunku noqdo tuulo yar oo iska wada warhaysa. Mar kale warbaahinta xidhiidhka bulshadu waxay dunidii ku soo koobtay qol keliyo in ay noqoto. Waxa fududaaday xog heliddii, xidhiidhkii dadka iyo isugu gudubkii wacaasha. Warbaahinta bulshadu waxay gebi ahaan isbeddel ku samaysay …
July 27, 2018	Qubane, Sheeko 0
Faysal oo magaalo ku weynaadey ayaa markuu 17 sano jirey u caano doontay miyiga oo uu degenaa adeerkii Jaamac. Wuxuu galay nolol ku cusub oo xitaa saacadihii iyo magacyadii maalmaha ayaa ka lumay ilaa uu garan waayey inta maalmood ee uga dhiman fasaxii iskuulka. Maalmo badan oo adag ayaa soo …
July 25, 2018	Warbixinno 0
Xajka yaan la siyaasadayne Dawladdu ha fasaxdo xajka ayaa siyaasiyiin iyo ganacsato kala duwani maalmahan ku soo celcelinayeen. Maadaama aysan jirin xayiraad ay Dawladda Soomaaliya saartay xajka ama shirkadaha xajka, dacwadda socotaa waa mid u muuqata in loola jeedo kootadii Jubba iyo Daallo xajku ugu xidhnaa halkeedii ha laga sii …
Sidii uu Shiinuhu Siri Laanka dekad uga dishay!
July 22, 2018	Tarjumaad, Warbixinno 0
How China Got Sri Lanka to Cough Up a Port Sidii uu Shiinuhu Siri Laanka dekad uga dishay! Waxaa qortay: Maria Abi-Habib New York Times Waxaa tarjumay: Maxamed Saahid June 25, 2018 Hambantota, Siri Laanka – Mar walba oo madaxweynaha Siri Laanka, Mahinda Rajapaksa, uu xulufadiisa Shiinaha u doonto deyn …
Ganacsato dhiigmiirato ah iyo siyaasiyiin bilaa damiir ah
July 14, 2018	Aragti 0
Sannadkii 2012 ayaan xajiyey. Waxaan mar la joogay xujaajta Kiiniya oo degganaa meel aad u wanaagsan oo nadiif ah, saddexda waqti cunto fiican loo karinayey, basaskoodu mar kasta diyaar ahaayeen, diyaaradda ay sii noqodka raacayaanna ay maalin la og yahay baxaysay. Dhanka kale, xujaajta Soomaaliya meeshoodu waxay ahayd sidii waabab aad …
Gabowga iyo halabuurka Soomaalida
July 14, 2018	Suugaan 0
Waxyaalaha Soomaalidu ay ka gabaydo waxa ka mid ah da’da iyo gabowga. Gabyaa dhawr ah ayaa si togan gabow iyo da’ ay gongaha dhigeen gabayo ku faalleeyey qarniyadii hore, iyaga oo is barbardhigaya dhallinyarannimada aadmigu soo maro iyo heerarka nolosha ilaa laga gaadhayo heerka hawlqabnimada iyo mararka qaarkood asaasagnimada. Waxa ka …